रामकुमारीलाई ठूलो चिन्ता ला.. भोली २० प्रतिशत पुगेन भने के गर्ने ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
रामकुमारीलाई ठूलो चिन्ता ला.. भोली २० प्रतिशत पुगेन भने के गर्ने ?
भोली निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताको लागी सनाखतमा जानु पर्ने भए पनि हिजै देखी माधव नेपाल टिमले आफ्ना सांसद र केन्द्रिय सदस्यलाई चन्द्रागिरीमा लगेर खुवाइ पिआइ राखेको छ । तर पनि उनीहरुलाई अझै भोली सनाखत गर्ने बेलासम्म २० प्रतिशन नपुग्ने होकी भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।
माधव कुमार नेपाल टिममा सबैभन्दा उग्र सँग लागेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई भोली सम्म २० प्रतिशत पुगेन र पार्टी दर्ता गर्न सकिएन भने के गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको देखिन्छ । यता एमाले एक ढिक्का भएको सन्देश जाने वित्तिकै त्यस्तै आशयको अभिव्यक्ति झाँक्रीले दिएकी छिन् ।
एउटा भनाइ नै छ जो कमजोर छ उ कराउछ या डराउँछ । रामकुमारी झाँक्रीले पनी ठिक त्यस्तै व्यवहार गरेकी छिन् । माधव नेपालको २० प्रतिशत पुग्छ की पुग्दैन भनेर कसैले सोधेकै छैन हाम्रो २० प्रतिशत पुग्छ कोही डराउँनै पदैन भन्दै झाँक्री बसेकी छिन् ।
रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो सामाजिक संजालामा ढुक्कले २० प्रतिशत पुग्ने दावी गर्दै ठिक त्यसबेला स्टाटस लेखिन् जति बेला तुलसीलाल स्मृती प्रतिष्ठान च्यासलमा यस अघि माधव नेपाल समूहमा लागेका नेताहरुको सहितको स्थायी कमिटीको बैठक भर्खरै सकिएको थियो ।
एमालले स्थायी कमिटी बैठक सकिएर सबै नेताहरुले सामुहिक फोटो खिचेर देशव्यापी एकताको सन्देश दिँदै गर्दा रामकुमारी झाँक्री भने भोली २० प्रतिशत पुर्याएरै छोड्ने उद्घोष गर्दै थिइन ।झाँक्रीले आफ्नो दलमा केन्द्रीय सदस्य र सांसदको संख्या बढेको दाबी गरेकी छन्।
‘निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरूको संख्या निवेदन दर्ताको दिन भन्दा बढेको छ,’ उनले भनिन्। बुधबार सनाखतका लागि आवश्यक संख्या पुग्ने उनले दाबी गरिन्। बाहिर हल्ला चलेजस्तो आवश्यक संख्या नपुग्ने कुरामा आधार नभएको झाँक्रीको भनाइ छ।
उक्त दलको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ। चन्द्रागिरीमा सोमबारदेखि बसेको बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधान, अन्तरिम नियमावलीमाथि छलफल गरेको छ।पार्टीको घोषणा र कम्यूनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जागरणका विषयमा पनि छलफल भएको झाँक्रीले बताइन्।
आफ्नो समाजिक संजालमा एकिकृत समाजवादी पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले यस्तो लेखेकी छिन् ‘पार्टीको अन्तरिम बिधान, अन्तरिम नियमावली, पार्टीको घोषणा र कम्यूनिष्ट आन्दोलनको पुनर्जागरण किन? भन्ने राजनीतिक विषयहरूको छलफलमा छौँ। हामी भोली निर्वाचन आयोगमा सनाखत गर्नेछौँ।
बाहिर चलेजस्तो कानुन बमोजिमको आवश्यक संख्या नपुग्ने भन्ने छैन। निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरूको संख्या पनि निवेदन दर्ताको दिन भन्दा बढेको छ। सद्भावको लागि धन्यवाद’